Soo dejiso Bell 222A FSX & P3D - Rikoooo
downloads 8 889
Eagle Rotorcraft mataliddu
Bell 222A waa natiijada ku dhawaad ​​saddex sano oo ah shaqo adag iyo kalsooni. Mashruucan ayaa ka badbaaday dayacaadyo badan oo ahaa xitaa dariiqa lagu xakamaynayo walbahaarka dhimashada dhowr xubnood oo qoyska ka mid ah iyo asxaabtii kooxda ERS. Jaangooyooyinka Eagle Rotorcraft waa kufaraxsan yihiin inay ugu dambeyntii awoodaan inay soo qaadaan 222A inay dhagaystayaasha daawadaan. Inkastoo ay jiraan horumarin kale oo mustaqbalka ah, sii deynta waa mid si weyn loo duuli karo oo loo adeegsan karo.
Si dhakhso ah oo bilawga ah ee makiinadaha loo eego fiidiyowga ay sameeyeen Rikoooo hoose ee bogga.
Akhrinta buugani waa muhiim, qaabka PDF.
• Iskuxirka is-xoqidda, khariidada boodka, iyo khariidadaha qaaska ah
• FSX animations gaar ah
• 1 tayada sare ee dibadda iyo qaabka gudaha
• 4 gacanta alaab dibedda ah
• Nidaamka bilawga ah ee bilowga
• Qalabka dhawaaqa tayo sare leh
Nidaamka Hirgelinta Awoodda Horumarinta
Author: Eagle Rotorcraft mataliddu